Baarlammaanka oo maanta ka doodaya xaaladda ammaan ee Muqdisho - Halbeeg News
Baarlammaanka oo maanta ka doodaya xaaladda ammaan ee Muqdisho
MUQDISHO (HALBEEG) – Baarlammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kal-fadhigoodii afraad magaalada Muqdisho uga socdo, ayaa maanta oo Isniin ah fadhi ay leeyihiin uga doodi doona xaaladda ammaan ee dalka.
Ajandeyaasha ugu muhiimsan ee xildhibaannadu maanta kulankooda ku gorfeyn doonaan waxaa kamid ah: sugidda ammaanka caasimadda, hawlgallada Al shabaab looga xoraynayo dalka iyo weliba siyaasadda dowladda ee ku wajahan bixitaanka ciidamada AMISOM.
Xildhibaannada ayaa sidoo kale ka doodi doona sugidda ammaanka mas’uuliyiinta dowladda, gaar ahaan xildhibaannada labada aqal ee Baarlammaanka Federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyey, iyadoo la xiray qaar kamid ah jidadka muhiimka ah, gaar ahaan waddooyinka gala Xarunta Golaha Shacabka.
Fadhiga baarlammaanku uga doodayo xaaladaha ammaanka ee dalka, wuxuu kusoo aadayaa labo maalmood kaddib markii qarax gaarigiisa loogu xiray lagu dhaawacay Xildhibaan Maxamad Mursal Maxamuud Booroow.
Xildhibaanka oo xaaladdiisa caafimaad aad u liidato, waxaa shalay isbitaalka Digfeer ku booqday mas’uuliyiin dowladda ka ka tirsan oo ay kamid ahaayeen Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Guddoommiye Ku Xigeenka Golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jirta sidii ay si buuxda gacanta ugu dhigi lahayd nabadgelyada dalka, maadaama dabayaaqada sannadkan 2018 ciidamada AMISOM bilaabi doonaan qorshaha ay uga baxayaan deegaannada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya.
Ciidamada Qalabka Sida ee Dowladda Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegi doona ammaanka guud ahaan dalka, marka la gaaro sannadka 2020.
Madaxwaynaha Jabuuti oo magaalada Jeddah kula kulmaya dhiggiisa Eritrea
Wasiirka A. Dibadda oo qaabilay Ku Simaha Wakiilka Midowga Yurub